မျိုးသူရေရေးသည့် ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ (မြန်မာလို)
မျိုးသူရေရေးသည့် ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် . အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ပုံ ချိတ်ဆက်နည်းကို အသေးစိတ် ရေးထားတာဖြစ်လို့ လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ . နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ သူတွေအဖို့တော့ အရမ်းကို လိုချင်နေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲ ..
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download megaupload ၊ Download rapidshare ၊ Download nyinaymin.net ၊ Download 4
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:21 AM